Broken sternum (ရင်ညွန့်ရိုးကျိုးခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Broken sternum (ရင်ညွန့်ရိုးကျိုးခြင်း)
Broken sternum (ရင်ညွန့်ရိုးကျိုးခြင်း) ကဘာလဲ။
ရင်ညွန့်ရိုးကျိုးခြင်းဆိုသည်မှာ ရင်သားရိုးကျိုးသွားခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ရင်ညွန့်ရိုးကျိုးခြင်းသည် အရိုးအားရင်ဘတ်အရှေ့မှ
Broken sternum (ရင်ညွန့်ရိုးကျိုးခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Broken sternum (ရင်ညွန့်ရိုးကျိုးခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ရင်ညွန့်ရိုးကျိုးခြင်း ရဲ့ရောဂါလက္ခဏာများတွင် ချော်လဲခြင်း(သို့)တိုက်ရိုက်ထိခိုက်မှုတခုအပြီး ရင်ဘတ်ရှေ့တည့်
တည့်မှ ရုတ်တရက်စတင်နာကျင်ကိုက်ခဲလာခြင်းပါဝင်သည်။ ထိုနာ
ကျင်မှုသည် ဖြစ်ပွားရာနေရာတွင်သာဖြစ်ပြီးဘေးသို့ ပြန့်သွားခြင်းမရှိပေ။ အရိုးကျိုးသွားသောနေရာအား ထိခိုက်လျှင်နာ
နှုန်းသောဝေဒနာရှင်များတွင် အသက်ရှူရခက်သည့် အခြေအနေများကြုံတွေ့ရနိုင်ပါသည်။
Broken sternum (ရင်ညွန့်ရိုးကျိုးခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
သည်။ နှလုံးနှင့်အဆုတ်ကို လက်ဖြင့် ဖိ၍အသက်ကယ်စဉ်တွင်လည်းရင်ညွန့်ရိုးကျိုးသွားနိုင်ပါသည်။ ပို၍
နည်းပါးသောအားဖြင့်လည်း ဥပမာ ဂေါက်ရိုက်သူများနှင့် အလေးမသူများတွင်ရင်သားရိုးကျိုးသွားနိုင်ကြောင်းမြင်တွေ့ခဲ့
ပို၍ဖြစ်နိုင်ချေများသည်။ အရိုးကျိုးခြင်းသည် အဖြစ်များသောထိခိုက်
မှုတခုဖြစ်ပြီး ကုသရန်ရိုးရှင်းပါသော်လည်း ရင်ညွန့်ရိုးကျိုးခြင်းအား
ငါ့ဆီမှာ Broken sternum (ရင်ညွန့်ရိုးကျိုးခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
Broken sternum (ရင်ညွန့်ရိုးကျိုးခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
နှင့်ဓါတ်မှန်ရိုက်သည့်စနစ်များပေါ်တွင် အခြေခံသည်။ ရင်ညွန့်ရိုး
အားဆရာဝန်သည် ကိုယ်တွယ်စမ်းသပ်ပြိး ပုံစံပြောင်းလဲသွားခြင်း
သည်။ ညိုမည်းစွဲခြင်း၊ပုံပျက်သွားခြင်း(သို့)ရောင်ရမ်းခြင်းတို့ရင်ဘတ်ပိုင်းတွင်ရှိမရှိကိုလည်း ရှာဖွေစစ်ဆေးတတ်ပါသည်။ ရင်ဘတ်
အထက်ပိုင်းအား ဓါတ်မှန်ရိုက်ခြင်းဖြင့်လည်း ကျိုးသွားသော ရင်ညွန့်ရိုး၏နေရာနှင့်ပြင်းထန်မှုကို သိနိုင်သည်။ ပြင်းထန်ပါက အထူးဓါတ်မှန်များ ဥပမာ ကွန်ပျူတာဓါတ်မှန် နှင့် သံလိုက်ဓါတ်မှန်တို့ဖြင့်လည်းအခြားသော ဆက်စပ်ဒဏ်ရာနှင့်ထိခိုက်မှုများကို ရှာဖွေရတတ်သည်။ အတွင်းပိုင်း
ကလီစာများ ဥပမာ နှလုံးနှင့် အဆုတ် အား ထိခိုက်မှုရှိမရှိကို ဆရာဝန်သည် အဓိကထားရှာဖွေတတ်သည်။ အခြားသောစစ်ဆေး
ထားရသောအစိတ်အပိုင်းပေါ်မူတည်ပြီး ပြုလုပ်ရန် ညွှန်ကြားခံရတတ်သည်။
Broken sternum (ရင်ညွန့်ရိုးကျိုးခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ရင်ညွန့်ရိုးကျိုးခြင်းအားကုသမှုသည် ပြင်းထန်မှုနှင့် ထိခိုက်သွားသောအတွင်းကလီစာအစိတ်အပိုင်းအမျိုးအစားပေါ်မူ
တည်သည်။ အကယ်၍ အဆုတ်၊နှလုံး(သို့)သွေးကြောများအား ပြင်းထန်ဒဏ်ရာများ ဖြစ်ပွားပါက အသက်ကယ်ကုသမှုအစီအစဉ်များအား စတင်ရသည်။ ထိုကဲ့သို့
တည်ငြိမ်နေပါက အခြားသောကုသမှုအစီအစဉ်များကို စတင်တတ်
သည်။ ရင်ညွန့်ရိုးကျိုးခြင်းအား သက်သာအောင်သာကုသရာတွင်10ပတ်မှ 24ပတ်လောက်အနားယူခြင်းနှင့် ထိခိုက်ရာနေရာအား အအေးကပ်
ပေးခြင်းဖြင့် ရောင်ရမ်းမှုကို သက်သာစေခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ သို့
သော် ဖိအားမဖြစ်စေရန် သတိထားသင့်ပါသည်။ ရင်ညွန့်ရိုးကျိုးသူ
များရွက်ခြင်း တို့ကိုရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။ အနာသက်သာဆေးများ
ရိုးကျိုးခြင်းအား ခွဲစိတ်ကုသရန်မလိုအပ်တတ်သော်လည်း ကြီးမား
ပြင်းထန်ပါက(သို့)အတွင်းကလီစာများအား ထိခိုက်သွားပါက ခွဲစိတ်ကုသရတတ်သည်။ ရင်ညွန့်ရိုးတခုတည်းသာ ကျိုး
ထားသောသူများသည် အနာသက်သာအောင် ဆေးရုံခဏသာတက်ရန် လိုအပ်ပြီး 9ပတ်မှ
12ပတ်အတွင်း ပျမ်းမျှ10.4တွင် သက်သာသွားတတ်သည်။ သုံးပုံးနှစ်ပုံသောဝေဒနာရှင်များသည်အနာသက်သာသည့်ဆေးများသာလိုအပ်တတ်ပြီး မသက်သာခင်ကာလအတွင်းတွင် အပြင်းထန်ဆုံးလက္ခဏာမှာ ရင်
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက ရင်ညွန့်ရိုးကျိုးခြင်း ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် ရင်ညွန့်ရိုးကျိုးခြင်း ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ရင်ညွန့်ရိုးကြိုးရသည့် အများစုအကြောင်းအရင်းမှာ ယာဉ်တိုက်မှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ကားထိုင်ခုံခါးပတ်ပတ်ခြင်းဖြင့် ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။
ပြင်းထန်စွာတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ကစားရသော အားကစားများနှင့်အလွန် မြင့်သောဆောက်လုပ်ရေးနေရာများတွင် အကာအကွယ်
ကိရိယာများဝတ်ဆင်ခြင်းဖြင့် ရင်ညွန့်ရိုးမကျိုးအောင်ကာကွယ်နိုင်ပါသည်။ အလုပ်တွင်မည်သည့်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းများဝတ်ဆင်ထားခြင်းမရှိပဲ
Broken sternum. http://www.sportsinjuryclinic.net/sport-injuries/chest-abdomen-pain/sternum-fracture. Accessed November 2, 2017
Broken sternum. https://www.steadyhealth.com/articles/dangers-of-sternum-fracture-breast-bone. Accessed November 2, 2017